Famonoana rivotra? | Martech Zone
Zoma 17 Novambra 2006 Zoma, Oktobra 24, 2014 Douglas Karr
Haingam-pandeha no toerana hialako rivotra.
Ho an'ny tobin-dasantsy, tsy maintsy ekeko fa nanao 'extra' kely izy ireo noho ilay dia tsy azo ihodivirana mankany amin'ny tobin-tsolika. Ho an'ny iray, mitondra ny karatra valisoa Speedway aho izay nitahiry isa 15,000. Menatra aho manaiky fa tsy azoko ny dikan'izany, ankoatry ny indray mandeha dia mahazo tapakila tsy misy ilana azy aho ho an'ny sandwich na zavatra hafa. Saingy… mahatsiaro ho milay isaky ny mahita ireo teboka valisoa kely foana aho. (Misy mpanao dokam-barotra mihaino? Miasa ny isa!)
Ny zavatra tsara hafa momba ny Speedway dia ny firesahan'ny mpanjifa hatrany ny mpanjifa, ny fanadiovana, ny fahazoana antoka fa fohy ny làlana… ary manao zavatra mangatsiatsiaka toy ny fametrahana nutmeg sy kanelina amin'ny alàlan'ny kafe izy ireo. Ary be ny kafe. Fanamarihana ho an'ireo mpankafy kafe… Ny kafe Speedway dia tsy afaka mandresy ny Starbucks fa manadona ny vombony amin'ny tonon-tsakafo haingana.
Ka ny ampitso maraina dia nijery aho ary nahita fa nisy doka DHL teo amin'ny haavon'ny maso teo amin'ny fantson-tsolika. Amin'ny fantson-tsolika! EO ETO GASY! Azafady… avelao irery ny fahamasinan'ny fantsom-bolako! Te-hijoro eo fotsiny aho ary haka sary an-tsaina hoe ohatrinona ny tsindry ao ambadik'io fantson-tany io, isaky ny inona no nanaraha-maso azy io, ary raha sendra tafaporitsaka izany, moa ve ny Speedway hitsoka toy ny sehatra Mission Impossible mahafinaritra. Tsy te-hamaky doka avy amin'ny DHL amin'ny karazana fifanarahana fandefasana entana aho. Tena tsy izany aho. Minoa ahy azafady. Tsia. Mampanantena aho.
Ankoatra ny mpanonta, iza no tena hahazo vola amin'izany?
Ahoana no mampitovy ny fametrahana lasantsy ao anaty fiarako amin'ny fahalianana momba izay mety ho mpandefa entana tsara indrindra hikarakara ny entako fialantsasatra?
Inona avy ny lasibatra demografika na fitondran-tena ampitoviko rehefa mitroka lasantsy hahaliana ny mpivarotra iray hametraka an'ity doka ity eo imasoko?
Firy ny fivarotana marketing niditra an'io? Tsy maninona, azonao lazaina amiko. Tsy hiteny amin'iza amin'iza aho. Io fihaonan'ny tetika tamin'ny 2006 io tamin'ny volana desambra lasa teo, sa tsy izany? Voafitaka tamin'ny mochas dipoavatra ianao. Fantatro. Tonga tany aho.
Tsy azoko ilay izy. TSY atao dokam-barotra ny fahitana. Ireo boky tantara dia feno orinasa nandany dokambarotra Super Bowl an-tapitrisany. Nahita azy ny rehetra, saingy tsy nisy nividy tamin'izy ireo. Tadiavo ny mpihaino anao, miresaka aminy amin'ny fomba iresahan'izy ireo amin'izy ireo, ary karakarao tsara izy ireo.
Mirary soa amin'ny doka DHL anao! Toa tiako ilay bandy fonosana eo akaikin'ny Thai Gardens (ary tiako ny Thai Gardens) amin'ny County Line Road eto Greenwood. Lafo kokoa noho ny olon-drehetra izy, fa manampy ahy foana hahita ny boaty mety sy ny fonosana mety ary ny fomba mety ahatongavana any. Tsy nandiso ahy mihitsy izy… ary fohy kokoa noho ny olon-drehetra foana ny andalana!
Raha miasa ny Gas Tubevertising dia tokony ho ilay Goodyear ampitan'ny dokambarotra amoron-dàlana any. Sendra mijery ny kodiaranao ianao farafahakeliny minitra vitsivitsy eo am-pamoahana gazy, manontany tena ianao raha ambany loatra ve ny dian'ireo.
Tags: dokam-barotrafantson-tsolikapaompy gazydoka paompytobin-tsolika
Ao anatin'ny 25 taona ho avy, ny faminaniako
Avereno jerena aho! Mitoraka bilaogy ho an'ny Dolara
17 Novambra 2006 à 10:33
Fantatrao fa tsy azo antoka ny fampiasana ny findainao izay manakaiky ny paompy